Rastrabani.com | » तपाईंले पर्याप्त ध्यान गर्नुभयो भने वरिपरी आकाश तत्त्व बढ्दै जान्छ तपाईंले पर्याप्त ध्यान गर्नुभयो भने वरिपरी आकाश तत्त्व बढ्दै जान्छ – Rastrabani.com
Rastrabani News November 29, 2021
यहाँको परम्परा नै यस्तो रहेको छ कि यदि तपाईं सही परिवेश सृजना गर्न चाहनुहुन्छ भने, सबैभन्दा पहिला तपाईं दियो बाल्नुहुन्छ । तपाईंहरूमध्ये कतिले दियो बाल्ने गर्नुहुन्छ ? यदि तपाईंले दियो बालेर यत्तिकै त्यहाँ बसिरहनु भयो भने, तपाईंले निश्चय नै फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ— तपाईंले कुनै पनि भगवानमा विश्वास गर्नैपर्दैन ! तपाईंले दियो बाल्नेबित्तिकै, ज्योतिको वरिपरी स्वतः एउटा विशेष आकाशीय क्षेत्र सृजना हुन्छ । आकाशीय क्षेत्र जति बढी हुन्छ, सञ्चार (संवाद) पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ । दिव्यसँग संवाद गर्नुअघि सही किसिमको परिवेश, एक विशेष मात्रामा आकाशीय क्षेत्र सृजना गर्नु उचित हुन्छ । किनकि, आकाशीय क्षेत्र नहुने हो भने, भित्तासँग कुरा गर्नु बराबर हुन्छ । यदि तपाईंले पर्याप्त ध्यान गर्नुभयो भने, त्यसबेला समेत तपाईंको वरिपरी आकाश तत्त्व बढ्दै जान्छ ।
यदि तपाईं कहिल्यै क्याम्प फायर वा धूनी (मूढा बलेको आगो) को वरिपरी बस्नुभएको छ भने, सायद तपाईंले यो ख्याल गर्नुभएको होला कि धूनीको वरिपरि भनिएका कथाहरूले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने गर्छन् । उहिलेका कथावाचकहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा थियो । तपाईंलाई कथा र परिवेशप्रति अत्यधिक ग्रहणशील बनाउनको निम्ति यी सरल तरिकाहरू अपनाइन्थ्यो ।
अग्नि फरक–फरक प्रकारको हुन्छ । जीवन भनेकै अग्नि हो । सूर्यको अग्निले गर्दा नै यस धरतीमा जीवन सम्भव भएको छ । मानव शरीरमा यो अग्नि जठराग्नि को रूपमा प्रकट हुन सक्छ । जठराग्निको कारणले तपाईंलाई भोक लाग्ने गर्दछ, किनकि जठराग्नि पेटको अग्नि हो, जननेन्द्रियको अग्नि हो । यदि तपाईंको भोक मेटियो भनेमात्र, यो “कामवासनाको अग्नि” सल्किनेछ । जसले केही खाएको हुँदैन, उसलाई कामवासनाप्रति चासो नै हुँदैन । यदि तपाईंले जठराग्निलाई रूपान्तरण गर्नुभयो भने, यो चित्ताग्नि बन्न सक्छ । त्यसबेला, तपाईं बौद्धिक रूपमा तीक्ष्ण बन्नुहुन्छ । कामवासना र खानाप्रतिको उत्सुकता हराउँछ, किनकि तपाईंमा बुद्धिको अग्नि सल्किएको हुन्छ ।
चित्ताग्निलाई पनि रूपान्तरण गरियो भने भूताग्नि हुन्छ । भूताग्नी भनेको पञ्च तत्त्वहरूको अग्नि हो । एक योगीमा यिनै तत्त्वहरूको अग्नि हुन्छ । तपाईंले केही यस्ता योगीहरूको बारेमा सुन्नुभएको हुनुपर्छ, जसलाई केही समयको लागि जमिनभित्र पुरिएको थियो— त्यसबेला उनीहरूको श्वास र मुटुको चाल पूरै बन्द थियो, तैपनि उनीहरू जीवित थिए । साथै, यस्ता योगीहरू समेत थिए,जसले पारद (मर्करी) वा विष सेवन गर्थे । यदि उनीहरू योगी नभएका भए, त्यसो गर्दा उनीहरू जीवित रहने थिएनन् । जबसम्म तपाईंको भूताग्नी प्रदीप्त हुँदैन, तपाईं तत्त्वहरूलाई आफूले चाहेअनुरूप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैगरी, योगमा सर्वाग्नि को बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । बाँकी तीन आयामहरूमध्ये सबैमा केही हदसम्म जठराग्नि हुन्छ ।
जब चित्ताग्निको उदय हुन्छ, तपाईंको बुद्धि आगो जस्तै हुन्छ, जसले तपाईं वरपर उज्यालो छर्दछ । यहाँ सम्म कि केही कमिक (कार्टुन) किताबहरूमा पनि कुनै पात्रले जुक्ति निकाल्यो भने, त्यसलाई प्रायः बिजुली बल्बको रूपमा देखाइन्छ । किनकि, जब बुद्धिको आगो दन्किन्छ, अचानक यसले उज्यालो छर्दछ । तपाईं यसबाट ताप समेत उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईंमा तत्त्वहरूको अग्नि सक्रिय छ भने, यो अग्नि फरक प्रकृतिको हुन्छ— अर्थात्, शीतल अग्नि । एकपटक जब तपाईंभित्र तत्त्वहरूको अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, तपाईं जीवनको प्रक्रियालाई नै आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ । अर्थात्, तपाईंले कसरी जन्म लिने, कसरी बाँच्ने, कुन तरिकाले मर्ने वा कुन तरिकाले नमर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू रोज्न सक्नुहुन्छ । तपाईंभित्र भूताग्नि हुनुको सुन्दर पक्ष के हो भने, अब तपाईंले दियो बाल्नुपर्दैन, तपाईंले यज्ञ वा होम गर्नुपर्दैन, तपाईंले पूजापाठ गर्नुपर्दैन, यहाँ सम्म कि तपाईं मन्दिरभित्र पस्न समेत पर्दैन— तपाईं मन्दिर जानुहुँदैन भनेको होइन; म यो भनिरहेको छु कि अब जान जरूरी छैन, किनकि जब तपाईंभित्र भूताग्नि (पञ्च तत्त्वहरूको अग्नि) सक्रिय हुन्छ, तपाईं स्वयं अस्तित्व बन्नुहुन्छ ।
महाभारतमा तपाईंले तीन प्रकारका मानिसहरू भेट्नुहुनेछ । यस्ता पात्रहरू छन्, जो अत्यधिक जठराग्निले दन्किरहेका हुन्छन्— उनीहरू केवल खान, प्रभुत्व जमाउन, सम्भोग गर्न, विजय प्राप्त गर्न चाहिरहेका हुन्छन् । केही यस्ता पात्रहरू छन्, जोसँग असाधारण रूपमा चित्ताग्नि छ । उनीहरूको बुद्धि यति तीक्ष्ण छ कि सामान्य मानिसहरूले १००० बर्षपछि मात्र देख्न सक्ने कुराहरू उनीहरूले अहिल्यै देखिरहेका हुन्छन् । केही पात्रहरू यस्ता छन्, जसमा भूताग्नि सक्रिय छ, जसकारण उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्णतया आफ्नो हातमा लिएका छन्— अर्थात्, उनीहरू कहिले जन्मिने, कसरी जन्मिने, यहाँ कसरी बाँच्ने अनि कहिले शरीर छोड्ने भनेर रोज्न सक्छन् । यहाँ सम्म कि जीवन र मरणको विकल्प समेत उनीहरूको हातमा हुन्छ । महाभारतका यी तीन प्रकारका मानिसहरूसँग जब तपाईंको साक्षात्कार हुन्छ, त्यसबेला उनीहरूका बारेमा कुनै अवधारणा नबनाउनु होस् । किनकि, यी सबैको कुनै न कुनै भूमिका रहेको छ ।
तपाईंले कृष्णलाई यी तीनवटै पक्षहरूमा सजिलै खेलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ । जब उनी जठराग्नि बन्न चाहन्छन्, उनी पूर्ण रूपमा जठराग्नि बन्दछन्— उनी खान्छन्, लडाइमा सहभागी हुन्छन्, साथै यसरी प्रेम गर्छन्, जुन अरू कसैले गर्न सक्दैनन् । जब उनी चित्ताग्नि बन्न चाहन्छन्, उनी पूर्णतया चित्ताग्नि बन्दछन्— उनको दूरदर्शिता अतुल्य छ । जब उनी भूताग्नि बन्न चाहन्छन्, उनी त्यस पक्षलाई आफूमा सम्पूर्णतया सक्रिय गर्छन् । यी तीनवटै क्षेत्रहरूमा उनको भूमिका अभूतपूर्व रहेको छ । म यो चाहन्छु कि यस कथामार्फत तपाईं आफ्नो जठराग्निलाई चित्ताग्निमा, चित्ताग्निलाई भूताग्निमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्— तपाईं यी तीनवटै पक्षहरूलाई अलिकति मात्रै भएपनि स्पर्श गर्नुहोस् ।